Penguin 2.0: Eziokwu Anọ I Kwesịrị Knowmara | Martech Zone
Penguin 2.0: Eziokwu Anọ I Kwesịrị Knowmara
O meela. Na otu blog post, a na-ewepụta otu algorithm, na awa ole na ole maka nhazi, Penguin 2.0 eweputala. Willntanetị agaghị adịkwa otu. Matt Cutts bipụtara mkpirikpi post na isiokwu a na May 22, 2013. Lee isi ihe anọ ị kwesịrị ịma gbasara Penguin 2.0
1. Penguuin 2.0 metụtara 2.3% nke ajụjụ Bekee-US niile.
Ka 2.3% ghara ịda ụda dịka ọnụọgụ pere mpe, buru n'uche na ọ nwere ihe dị ka ijeri nchọta Google ise kwa ụbọchị. 5% nke 2.3 ijeri bụ ọtụtụ. Otu saịtị azụmaahịa obere azụmaahịa nwere ike ịdabere na ajụjụ 5 dị iche iche maka okporo ụzọ na ego enweta ego. Mmetụta dị ukwuu karịa obere ọnụọgụ ntụpọ nwere ike ịkọwa.
Site n'iji ya tụnyere, Penguin 1.0 metụtara 3.1% na weebụsaịtị niile. Cheta ọdachi nke ahụ?
2. Asụsụ ndị ọzọ na-ajụkwa Penguin 2.0 metụtakwara
Agbanyeghi na imee ihe ka otutu ajuju nke Google na asusu bekee, enwere otutu nde ajuju ajuju nke asusu ndi ozo. Mmetụta algorithmic nke Google metụtara na asụsụ ndị ọzọ, na-etinye nnukwu kibosh na webspam na ọkwa ụwa. Asụsụ akpọnwụ karịa percentages nke webspam ga-emetụta karịa.
3. The algọridim agbanweela n'ụzọ.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na Google nwere kpamkpam gbanwere algorithm na Penguin 2.0. Nke a abughi ume ọhụrụ data n’agbanyeghi na ịnye aha “2.0” na-eme ka ọ daa otu ahụ. Ihe algọridim ohuru pụtara na ọtụtụ usoro ochie nke spammy agaghị arụ ọrụ ọzọ.
N'ụzọ doro anya, nke a abụghị oge mbụ anyị zutere Penguin. Nke a bụ akụkọ ntolite isi nke Penguuin.
Eprel 24, 2013: Penguuin 1. Mmelite Penguin nke mbụ bịara na Eprel 24, 2012, ma metụta ihe karịrị 3% nke ajụjụ.
Mee 26, 2013: mmelite Penguin. Otu ọnwa ka e mesịrị, Google nyere algorithm ume, nke metụtara obere ajụjụ, gburugburu 01%
Ọktọba 5, 2013: mmelite Penguin. N'oge mgbụsị akwụkwọ nke 2012, Google emelitere data ahụ ọzọ. Oge a gbasara 0.3% nke ajụjụ metụtara.
Mee 22, 2013: Penguin 2.0 wepụtara, na-emetụta 2.3% ajụjụ niile.
Dị ka Cutts kọwara banyere 2.0, “Ọ bụ ọgbọ ọhụụ nke algorithms. Ihe gara aga nke Penguin ga-eleba anya na peeji nke saịtị. Ọgbọ ọhụrụ nke Penguuin miri emi nke ukwuu ma nwee nnukwu mmetụta na obere mpaghara ụfọdụ.
Webmasters emetụta Penguin ga-enwe mmetụta nke ukwuu, ọ ga-abụ na ọ ga-ewekwa ogologo oge iji gbakee. Algọridim a dị omimi, nke pụtara na mmetụta ya na-agbadata n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ peeji ọ bụla mebiri emebi.
4. A ga-enwekwu Penguins.
Anyị anụbeghị nke ikpeazụ nke Penguuin. Anyị na-atụ anya mgbanwe ndị ọzọ nke algorithm, dịka Google mere na mgbanwe ọ bụla algorithmic ha rụtụrụla. Algọridim gbanwere site na ebe nrụọrụ weebụ na-agbanwe agbanwe.
Matt Cutts kwuru, "Anyị nwere ike ịgbanwe mmetụta ahụ mana anyị chọrọ ịmalite n'otu ọkwa wee nwee ike gbanwee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị." Otu onye na-ekwu okwu na blog ya jụrụ kpọmkwem banyere ma Google ọ ga - agọnahụ uru dị elu maka njikọta spam, "Maazị Cutts zara," nke na - abịa n'ihu. "
Nke a na-egosi ịbawanye ụba na, ikekwe, maka ụfọdụ ịtọpụ, mmetụta nke Penguin 2.0 na ọnwa ole na ole sochirinụ.
Ọtụtụ webmasters na SEOs enwere nghọta n'ụzọ doro anya na mmetụta na-adịghị mma nke mgbanwe algorithm na saịtị ndị ọzọ dị mma. Fọdụ webmasters nọ na niche ndị na-egwu mmiri na webspam. Ha ejiriwo ọnwa ma ọ bụ afọ mepụta ọdịnaya siri ike, wuo njikọ dị elu, na ịmepụta saịtị ziri ezi. N'agbanyeghị nke ahụ, site na mwepụta nke algorithm ọhụrụ, ha na-enweta ntaramahụhụ, kwa. Otu onye na-elekọta webmaster na-akwa arịrị, “Ọ bụụrụ m nzuzu itinye ego n'afọ gara aga iji wuo ebe ikike?”
Na nkasi obi, Cutts dere, "Anyị nwere ụfọdụ ihe na-abịa ma emechaa oge okpomọkụ a nke kwesịrị inye aka n'ụdị saịtị ị kwuru, yabụ echere m na ị mere nhọrọ ziri ezi iji rụọ ọrụ na iwulite ikike."
Ka oge na-aga, algorithm mechara jide webspam. A ka nwere ụfọdụ ụzọ eji egwu sistemụ a, mana egwuregwu a bịara na-akwụsị mgbe Panda ma ọ bụ Penguuin gbagoro bọọlụ. Ọ dị mma mgbe niile irubere iwu nke egwuregwu ahụ.
Ọ na-emetụta gị Penguin 2.0?
Ọ bụrụ n’ị na-eche ma Penguin 2.0 emetụla gị, ị nwere ike ịme nyocha nke gị.
Lelee isiokwu gị ọkwa. Ọ bụrụ na ha ajụla nke ukwuu bido na Mee 22, enwere ezigbo ohere na saịtị gị metụtara.
Nyochaa peeji ndị natara ọtụtụ njikọ ụlọ, dịka ọmụmaatụ ụlọ obibi gị, ibe ntụgharị, peeji nke edemede, ma ọ bụ ihu ọdịda. Ọ bụrụ na okporo ụzọ ajụla nke ọma, nke a bụ ihe ịrịba ama nke mmetụta Penguin 2.0.
Chọọ maka mgbanwe ọ bụla nwere ike ịgbanwe nke isiokwu dị iche iche karịa naanị mkpụrụokwu akọwapụtara. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi maka "windo vps," karịa nyochaa isiokwu dị ka "windo vps na-anabata," "nweta windo vps na-anabata," na isiokwu ndị ọzọ yiri ya.
Soro okporo ụzọ organic gị dị omimi na obosara. Google nchịkọta bụ enyi gị ka ị na-amụ ebe nrụọrụ gị, wee weghachite mmetụta ọ bụla. Lezienụ anya na pasent nke okporo ụzọ ahịhịa, ma mee nke a n'ofe saịtị niile dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, chọpụta peeji ndị nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke okporo ụzọ dị n'ime ọnwa Eprel 21-May 21. Mgbe ahụ, chọpụta ma ọnụọgụgụ ndị a bido na Mee 22.
Ajụjụ kacha mkpa abụghị “ọ metụtara m,” mana “gịnị ka m ga - eme ugbu a emetụtara m?”
Ọ bụrụ na Penguin 2.0 emetụtala gị, lee ihe ị kwesịrị ime:
Etu ị ga-esi gbakee na Penguin 2.0
Kwụpụ 1. Zuo ike. Ọ ga-adị mma.
Kwụpụ 2. Chọpụta ma wepu spammy ma ọ bụ peeji nke dị ala na weebụsaịtị gị. Maka ibe ọ bụla na saịtị gị, jụọ onwe gị ma ọ na-enye ndị ọrụ uru ọfụma ma ọ bụ na ọ kachasị dị ka nsonaazụ njin ọchụchọ. Ọ bụrụ na azịza ya bụ eziokwu ma ọ bụrụ na nke abụọ, ị kwesịrị ịbawanye ma ọ bụ wepụ ya kpamkpam na saịtị gị.
nzọụkwụ 3. Chọpụta ma wepu njikọ inbound spammy. Iji mata nke njikọ nwere ike iweda ala gị rankings na-eme ka ị na-emetụta Penguuin 2.0, ị ga-mkpa ịrụ ihe inbound njikọ profaịlụ nyocha (ma ọ bụ nwee ọkachamara mere ya maka gị). Mgbe ịchọpụtachara njikọ dị mkpa iji wepu, gbalịa wepu ha site na izipu webmasters ma jiri nkwanye ugwu gwa ha ka wepu njikọ na weebụsaịtị gị. Mgbe ị dechara mwepụ arịrịọ, jide n'aka na ị ga-achọpụtakwa ha, jiri Ngwaọrụ Disavow nke Google.
Kwụpụ 4. Tinye aka na mgbasa ozi ụlọ njikọ inbound ọhụrụ. Ikwesiri igosi Google na ebe nrụọrụ weebụ gi kwesiri ogo na elu nke nsonaazụ ọchụchọ. Iji mee nke a, ị ga-achọ ụfọdụ ntụkwasị obi ntụkwasị obi sitere n'aka ndị ọzọ. Ntuli aka ndị a na-abịa n'ụdị njikọ inbound sitere n'aka ndị mbipụta ndị ọzọ Google tụkwasịrị obi. Chọpụta nke ndị nkwusa Google na-ahazi na elu nke nsonaazụ ọchụchọ maka isiokwu gị bụ isi ma kpọtụrụ ha banyere ịme post blog ọbịa.
Atụmatụ SEO siri ike na-aga n'ihu ga-ajụ ịnabata ma ọ bụ itinye aka na usoro okpu ojii. Ọ ga-ekweta na iwekota na 3 ogidi nke SEO n'ụzọ na-agbakwunye uru maka ndị ọrụ ma gosipụta ntụkwasị obi, ịtụkwasị obi, na ikike. Gbado anya na ọdịnaya dị ike, ma soro naanị ụlọ ọrụ SEO nwere aha ọma rụọ ọrụ nwere ndekọ gbara ọkpụrụkpụ nke saịtị enyere iji nwee ihe ịga nke ọma.
Tags: google +penguinpenguin 2.0search engine njikarịchaA